Soo -saareyaasha & Alaab -qeybiyeyaasha - Warshadda Alaabta Shiinaha
LPC chip decryption waa succ ...
Si aad macaamiisha u siiso adeeg xirfad leh, hufan oo ku habboon adeegidda furfuridda adeegga tikniyoolajiyadda qashin -qubka
Waxaan aaminsanahay in tayada ay tahay nafta meheradda, oo aan siino warshadaha elektiroonigga ah waqti-qaadasho, adeegyo injineernimo oo horumarsan. Macaamiisha daacadda ahi mar walba way nala shaqeeyaan, oo marka macaamiisha cusubi maqlaan sumcad wanaagsan, waxay u yimaaddaan Sichi si ay u abuuraan iskaashi. Waxaan rajeyneynaa inaan ku siino adeeg tayo sare leh!
Shirkaddu waxay had iyo jeer u hoggaansamaysaa fikradda hawlgalka meheradda ee "noqoshada xirfadle, sidaa darteed lagu qanci karo", waxayna dhistay koox farsamo oo xirfad leh si ay macaamiisha u siiso adeegyo farsamo oo iibinta ka hor iyo iibinta kadib,
Adeegga iibka kadib oo tayo sare leh, waxaan u hoggaansameynay fikradda "adeegga ugu horreeya", u hoggaansan inaan ku siino adeegga iibinta ugu fiican ee warshadaha oo dhan, si loo xalliyo dhammaan dhinacyada dhibaatooyinka farsamo ee R&D
PCB ayaa si weyn loogu isticmaalay soo saarista alaabta elektarooniga ah. PCB la'aantiis, ma jiri doonto horumar degdeg ah ee warshadaha macluumaadka elektiroonigga ah ee casriga ah
Shenzhen Sichi Technology Co., LTD waxaa la aasaasay 2000. Waxaan ku hawlan nahay 1-32 lakab PCB si dhakhso ah, dayactirka iyo accessories horumarinta dhammaan qalabka caafimaadka, qalabka gacanta si toos ah, iyo qalabka isgaarsiinta mobile. Waxaan nahay mid ka mid ah shirkadaha ugu awoodda badan uguna saameynta badan meheradaha sida adeegyada hal-joogga ah ee kulanka PCB, nuqulka PCB, PCB clone, IC crack, design PCB, IC decryption, design chip chip, SMT processing, PCB been abuurka, wax soo saarka tusaalaha iyo debu ...
Shenzhen Sichi Technology Co., LTD waxaa la aasaasay 2000.We ku hawlan 1-32 lakab PCB si degdeg ah, dayactirka iyo accessories horumarinta dhammaan qalabka caafimaadka, qalabka gacanta si toos ah, iyo qalabka isgaarsiinta mobile. Waxaan nahay mid ka mid ah shirkadaha ugu awoodda badan uguna saameynta badan meheradaha sida adeegyada hal-joogga ah ee kulanka PCB, nuqulka PCB, PCB clone, IC crack, design PCB, IC decryption, design chip chip, SMT processing, PCB been abuurka, wax soo saarka tusaalaha iyo khalad ...
Hubinta tayada badeecadda, wax -ku -oolnimada sare, maaddada sare, tayada sare, si loo bixiyo hufnaan sare, iibinta hal shirkad tiknoolaji, adeeg tayo xirfadeed kuu leh
PCB ayaa sidoo kale si weyn loogu adeegsadaa wax soo saarka, warshadaha iyo warshadaha u dhow. Warshadahaani waxay leeyihiin qalab farsamo oo awood sare leh, kuwaas oo ay kaxeeyaan wareegyada shaqada ee awoodda sare leh oo u baahan tamar sare. Si taas loo gaaro, lakab qaro weyn oo naxaas ah ayaa lagu daboolay dusha PCB -ga, kaas oo, ka duwan PCB -ga elektiroonigga ah ee adag, oo leh ilaa 100 amperes. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay codsiyada sida alxanka qaansada, darawallada matoorada waawayn, baytariyada batari-asiidh, warshadaha milatariga iyo madmadowga suufka.
Badeecadaha elektaroonigga ah ayaa wax weyn ku soo kordhiyay warshadaha daryeelka caafimaadka sida baaritaanka, kormeerka iyo qalabka daweynta. Horumarinta farsamada elektaroonigga ah, codsiyada caafimaad ee aaladahaan elektiroonigga ah ayaa si isdaba joog ah u kobcaya, iyagoo noqonaya kuwo hufan oo xoog badan, taas oo horseedaysa suurtogalnimo cusub oo aan xad lahayn. PCB ee warshadaha caafimaadka ayaa ah mid aad u takhasusay si uu ula kulmo caqabadaha u gaarka ah aaladaha caafimaadka. PCB -ga caafimaadka ayaa sidoo kale laga samayn karaa substrate dabacsan, kaas oo u oggolaanaya PCB inuu foorarsado inta la isticmaalayo, taas oo lagama maarmaan u ah qalabka caafimaadka gudaha iyo dibaddaba.
U hoggaansamaan ruuxa dulqaadashada, ka -qaybgalka buuxa ee hagaajinta tayada, si joogto ah u nuugo tiknoolajiyadda caalamiga ah ee ugu dambaysa, hagaajinta tayada badeecada, daboolo baahiyaha macaamiisha, tartanka adag ee suuqa ayaa si wanaagsan u helay macaamiisha, mugga dalabka ayaa sii kordhaya sannadba sannadka .
Marka la eego badeecadaha tiknoolajiyadda sare, waa inaan ku sii wadnaa barashada ruuxa '' keena mabda ''. Waa inaan wax ka barannaa tiknoolojiyadda horumarsan oo aan hal -abuurnimo ku samaynaa go'aan, oo aan dib -u -abuurnaa iyada oo ku saleysan kuwii ka horreeyay.
Iyadoo la waafajinayo suuqa oo diiradda la saarayo horumarinta sayniska iyo teknolojiyadda, waaxda R&D ee Shenzhen Sichi waxay had iyo jeer u hoggaansamaysaa aaminsanaanta samaynta waddan awood leh iyada oo loo marayo sayniska iyo teknolojiyadda, waxayna si joogto ah u jebisaa caqabadaha farsamada ee muhiimka ah, si kor loogu qaado horumarka cilmi -baarista ee dalkeenna iyo dib -u -nooleynta warshadaha qaranka. Sannado badan oo horumar adag ah ka dib, waxay noqotay u-doodaha iyo hoggaamiyaha warshadaha tiknoolajiyadda sare ee Shiinaha, waxayna si joogto ah u dhiirrigelisaa horumarka Shiinaha “laga sameeyay Shiinaha” ilaa “Warshadaynta Caqliga leh ee Shiinaha”.
Shenzhen Sichi Technology Co., LTD waxaa la aasaasay 2000.We ku hawlan 1-32 lakab PCB si degdeg ah, dayactirka iyo accessories horumarinta dhammaan qalabka caafimaadka, qalabka gacanta si toos ah, iyo qalabka isgaarsiinta mobile. Waxaan nahay mid ka mid ah shirkadaha ugu awoodda badan uguna saameynta badan meheradaha sida adeegyada hal-joogga ah ee kulanka PCB, nuqulka PCB, PCB clone, IC crack, design PCB, IC decryption, design chip chip, SMT processing, PCB been abuurka, wax soo saarka tusaalaha iyo khaladka.